DriverPack Solution 2016 16.1 Full Version ISO (11-7 GB) ~ ဘလော့ခရီးသည်
DriverPack Solution 2016 16.1 Full Version ISO (11-7 GB) 8:35:00 am
Computer သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Driver ခွေပေါင်းများစွာနဲ့ Install လုပ်နေစရာမလို့ဘဲ နဲ့ ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တင် ပြီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့ 2016 ခုနှစ်နောက်ဆုံးထွက် ဖြစ်တဲ့ Driver Pack 2016 16 ကို Full Version လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖိုက်ဆိုဒ်ကတော့ နည်းနည်းကြီးတယ်ဗျာ အင်တာနက် အားကောင်းသူများမှသာ ဒေါင်းလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီကောင်ကိုလည်း ကျနော်တိုယ်တိုင် Upload တင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ ဒေါင်းပြီးတော့ အခုလက်ရှိ အသုံးပြုနေတာကြောင့် ကောင်လွန်းလို့ ပြန်ရှယ်ပြီ တင်ပေးလိုက်ရတာပါဗျာ ဆိုဒ်ကြီးလို့ ဒေါင်းရခက်နေသူများအတွက် ဖိုဒ်ဆိုဒ်အသေးဆုံးနဲ့ ဖိုင်ချုံးနိုင်သမျှ ပြုလုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင် Upload ပြန်တင်ပေးပါဦးမယ်နော် ခုလည်း 11-7 GB တစ်ခုလုံးကို တစ်ဖိုင်တည်းနဲ့ တင်ပေးထားတာကြောင့် ဒေါင်းရတာတော့ အဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်။ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒေါင်းယူရအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ရတာပါ ။ ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်နိုင်ကြလိမ်မယ့်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Windows XP / Vista/ 7/ 8/ (32 Bit & 64 Bit) အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ အောက်က လင့်မှာ ဝင်ရောက် ရယူနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
Below are some noticeable features which you'll experience after
DriverPack Solution 16.1 free download.
** DriverPack Solution 16.1 is very useful pack of Drivers.
** After installation it automatically runsascan.
** It containsanumber of Drivers.
** You will get the newest versions available.
** Its very easy to install.
** It is compatible with all the leading Computiong Companies.
DriverPack Solution 2016 16.1 Full Version ISO (11-7 GB) ကျနော်တင်သမျှ Post တွေကို Facebook မှ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုလို့ပါက >> လင်း နည်းပညာ page ကို Like လုပ်ထားပေးပါ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted in: Window Diver